စာချုပ်သက်တမ်းတိုးပြီး အသင်းအပေါ် သစ္စာရှိကြောင်း ပြသလိုက်တဲ့ ဇာဟာ
ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့တဲ့ ဇာဟာ Zaha
15 Aug 2018 . 7:10 PM
ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်း နာမည်ကျော်ကစားသမား ဇာဟာ Zaha ဟာ အသင်းနဲ့ (၅)နှစ်စာချုပ်သက်တမ်း တိုးခဲ့ပြီး စာချုပ်သစ်အရ တစ်ပတ်လစာပေါင်(၁၃၀၀၀၀)အထိ ရရှိမှာဖြစ်လို့ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းမှာ လစာငွေအများဆုံး ရရှိမယ့်ကစားသမားဖြစ်လာမှာပါ။ ဇာဟာကို ခေါ်ယူဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီး၊ စပါးတို့က ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပေမယ့် ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းက လိုချင်တဲ့ ပေါင်သန်း(၇၀)ပမာဏကို မပေးချင်လို့ အပြောင်းအရွှေ့က ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေ ဘယ်လိုပဲ ထွက်ပေါ်နေပါစေ ဇာဟာကတော့ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းမှာပဲ ဆက်နေမယ်လို့ ဆိုခဲ့တာကြောင့် ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းက အခုလို မြင့်မားတဲ့လစာငွေနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့တာပါ။
ခရစ္စပဲလေ့စ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဇာဟာက “စာချုပ်သစ်ကိစ္စကို အစောကတည်းက အပြီးသတ်ဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသင်းအတွက် အပြည့်အ၀ အာရုံစိုက်ကစားချင်လို့ပါ။ ဒီအသင်းနဲ့ အသင်းဖော်တွေကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီး အသင်းကို ဒီထက်ပိုတောင့်တင်းလာအောင် လုပ်ပြနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ခဲ့လို့လည်း အရမ်းကို ပျော်ရွှင်မိပါတယ်”လို့ သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တယ်။ ဇာဟာဟာ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ (၂၈၈)ပွဲကစားခဲ့ပြီး (၄၄)ဂိုးသွင်း၊ ဂိုးဖန်တီးမှု(၅၅)ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းရဲ့ (၁)နှစ်တာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ပြီးခဲ့တဲ့(၃)နှစ်ဆက်တိုက် ရယူနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Photo:Crystal Palace Twitter
ခရစ်စတယျပဲလစျေ့နဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးခဲ့တဲ့ ဇာဟာ Zaha
ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အသငျး နာမညျကြျောကစားသမား ဇာဟာ Zaha ဟာ အသငျးနဲ့ (၅)နှဈစာခြုပျသကျတမျး တိုးခဲ့ပွီး စာခြုပျသဈအရ တဈပတျလစာပေါငျ(၁၃၀၀၀၀)အထိ ရရှိမှာဖွဈလို့ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အသငျးမှာ လစာငှအေမြားဆုံး ရရှိမယျ့ကစားသမားဖွဈလာမှာပါ။ ဇာဟာကို ချေါယူဖို့ ပရီးမီးယားလိဂျ ထိပျသီးအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ခယျြလျဆီး၊ စပါးတို့က ပဈမှတျထားခဲ့ပမေယျ့ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အသငျးက လိုခငျြတဲ့ ပေါငျသနျး(၇၀)ပမာဏကို မပေးခငျြလို့ အပွောငျးအရှကေ့ ဖွဈမလာခဲ့ပါဘူး။ အနာဂတျနဲ့ပတျသကျပွီး သတငျးတှေ ဘယျလိုပဲ ထှကျပျေါနပေါစေ ဇာဟာကတော့ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အသငျးမှာပဲ ဆကျနမေယျလို့ ဆိုခဲ့တာကွောငျ့ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အသငျးက အခုလို မွငျ့မားတဲ့လစာငှနေဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးခဲ့တာပါ။
ခရစ်စပဲလစျေ့အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးခဲ့ပွီးနောကျမှာ ဇာဟာက “စာခြုပျသဈကိစ်စကို အစောကတညျးက အပွီးသတျဖို့ ဆန်ဒရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အသငျးအတှကျ အပွညျ့အ၀ အာရုံစိုကျကစားခငျြလို့ပါ။ ဒီအသငျးနဲ့ အသငျးဖျောတှကေို ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိပွီး အသငျးကို ဒီထကျပိုတောငျ့တငျးလာအောငျ လုပျပွနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးနိုငျခဲ့လို့လညျး အရမျးကို ပြျောရှငျမိပါတယျ”လို့ သူ့ရဲ့ Twitter စာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့တယျ။ ဇာဟာဟာ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ (၂၈၈)ပှဲကစားခဲ့ပွီး (၄၄)ဂိုးသှငျး၊ ဂိုးဖနျတီးမှု(၅၅)ကွိမျအထိ ပွုလုပျခဲ့တဲ့အပွငျ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အသငျးရဲ့ (၁)နှဈတာအကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို ပွီးခဲ့တဲ့(၃)နှဈဆကျတိုကျ ရယူနိုငျခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
by Naing Linn . 10 hours ago